ထိပ်တန်း Banggood ကမ်းလှမ်းမှုများ - စက်တင်ဘာ ၂၄ ရက်မှ ၃၀ ရက်၊ Androidsis
မင်းကိုနည်းပညာကောင်းကောင်းနဲ့သင်ကြိုက်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ စျေးနှုန်း၊ အရည်အသွေးနှင့်အာမခံချက်အတွက်အကောင်းဆုံးစတိုးဆိုင်တစ်ခုမှာ Banggood ဖြစ်သည်မှာသေချာသည်, ထိုတူညီသောအကြောင်းပြချက်များအတွက် 2017 ဇူလိုင်လ၏ယခုလမှယခုလမှစ။ ငါတို့သည်သင်တို့ကိုဆောင်ကြဉ်းသွားကြသည်သောအကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ် အကောင်းဆုံး Banggood သည်အပတ်စဉ် update ပြုလုပ်သည်.
ဒါကြောင့်လစဉ်လတိုင်းသင်ဤပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းကိုရှာဖွေနိုင်ပါလိမ့်မည် ထိပ်တန်းဟောကိန်းများ Banggoodဒီအပတ်မှာပဲအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ဈေးနှုန်းချိုသာသောတရုတ်ဇာစ်မြစ်၏အွန်လိုင်းစတိုးတွင်တွေ့နိုင်သည့်စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးကမ်းလှမ်းချက်များကိုအပတ်စဉ် update ပြုလုပ်ပေးမည်။ ကျနော်တို့ကိုလည်းအကြံပြုချင်တယ် တရားဝင် Banggood အက်ပ်ကိုဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ တပ်ဆင်ပါ ကမှတဆင့်ကတည်းကတစ် ဦး ကိုရယူသုံးအပြင် ၁၀% ထပ်မံလျှော့စျေးAPP မှတဆင့်သာရနိုင်သောအထူးသီးသန့်ကမ်းလှမ်းမှုများနှင့်အထူးလျှော့စျေးကုဒ်များကိုသင်မည်သူ့ကိုမဆိုရယူနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် Telegram သုံးစွဲသူဖြစ်ပါက၊ ကျနော်တို့ညှိနှိုင်းခြင်းနှင့်ကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုချန်နယ်ရှိသည် ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကွဲပြားခြားနားသောအွန်လိုင်းစတိုးများထံမှကောက်ယူသောစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးနည်းပညာကမ်းလှမ်းမှုများပါဝင်သည်။
1 စက်တင်ဘာ ၂၄ ရက်မှ ၃၀ ရက်အကြားပြုလုပ်နိုင်သည်
1.1 BlitzWolf ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအတွက်အထူးလျှော့စျေး
2 စက်တင်ဘာ ၂၄ ရက်မှ ၃၀ ရက်အကြားပြုလုပ်နိုင်သည်
2.1 LeEco Le2 X526 ကိုယခုအပတ်ဒေါ်လာ ၉၉.၉၉ ဖြင့်ရောင်းချသည်
3 စက်တင်ဘာ ၂၄ ရက်မှ ၃၀ ရက်အကြားပြုလုပ်နိုင်သည်
3.1 UMIDIGI One ကိုယူရို ၁၄၆.၁၆ သာဖြစ်သည်
3.2 UMIDIGI One Pro ကို ၁၇၁.၉၅ ယူရိုသာရှိသည်
3.3 ယူရို ၉၄.၅၇ ဖြင့် ၂၅% လျှော့စျေးရှိသည့် Elephone S7
3.4 LEAGOO S9 မှာယူရို ၁၂၀.၃၆ ဈေးနှုန်းဖြင့် ၁၈% လျှော့စျေးဖြင့်ရနိုင်သည်
3.52ယူရိုစျေးနှုန်းမှာ 33% လျှော့စျေးနှင့်အတူ DOOGEE MIX 171,95
3.6 ဈေးနှုန်း ၉၁.၁၃ ဒေါ်လာဖြင့် ၃၁% လျှော့စျေး Nubia M2 Lite
စက်တင်ဘာ ၂၄ ရက်မှ ၃၀ ရက်အကြားပြုလုပ်နိုင်သည်
၎င်းသည်ဆက်စပ်ပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများတွင်လူသိအများဆုံးအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Banggood မှကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့် ပတ်သက်၍ အရောင်းမြှင့်တင်ရေးအမြောက်အများကိုတွေ့ရှိရသည်။ USB ကြိုးများ၊ adapters များ၊ ပြင်ပဘက်ထရီများသို့မဟုတ်အားသွင်းစက်များမှာထုတ်ကုန်အချို့ဖြစ်သည် ကုမ္ပဏီကဤပရိုမိုးရှင်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုအရွက်။ ဒါကြောင့်မင်းကတစ်ယောက်ရှာနေမယ်ဆိုရင်အဲဒါဟာအကောင်းဆုံးအချိန်ပဲ။
အဆိုပါပရိုမိုးရှင်းအများဆုံးကွဲပြားကြသည်. 70% အထိလျှော့စျေး, BlitzWolf ထုတ်ကုန်နှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသော ၀ ယ်ရန်အတွက်ထုတ်ကုန်များသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်အမြောက်အများဝယ်ယူရန်အတွက်အထူးလျှော့စျေးများ။ ယခုအပတ်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ သူမလွတ်မြောက်ပါစေ
LeEco Le2 X526 ကိုယခုအပတ်ဒေါ်လာ ၉၉.၉၉ ဖြင့်ရောင်းချသည်
အာရှရှိလူကြိုက်အများဆုံးအမှတ်တံဆိပ်များထဲမှတစ်ခုသည်ကျွန်ုပ်တို့ကို၎င်း၏အကောင်းဆုံးပုံစံဖြင့်အကောင်းဆုံးပုံစံဖြင့်ထွက်ခွာစေသည်။ ၎င်းတွင် ၅.၅ လက်မမျက်နှာပြင်ရှိသည်၎င်းအတွင်း၌ကျွန်ုပ်တို့သည်တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်တွင်အပြည့်စုံဆုံးဖြစ်သော Qualcomm Snapdragon 652 ပရိုဆက်ဆာကိုစောင့်ဆိုင်းနေသည်။ ၎င်းတွင်3GB RAM နှင့်သိုလှောင်မှုပမာဏ 64 GB ရှိသည်။ အနောက်ကင်မရာက 16 MP ဖြစ်ပြီးရှေ့ကင်မရာက 8 MP ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဖုန်း၌လက်ဗွေရာအာရုံခံကိရိယာရှိပြီး၎င်းသည်၎င်း၏လျင်မြန်သောအားသွင်းခြင်းအတွက်လည်းထင်ရှားသည်။
ဖုန်းကိုရနိုင်သည် ဒီမြှင့်တင်ရေးမှာဒေါ်လာ ၉၉ ဒေါ်လာနဲ့ Banggood မှာပါ။ ဒီအကြီးအစျေးနှုန်းမှာတစ်ပါတ်အဘို့အရရှိနိုင်ပါ။
UMIDIGI One ကိုယူရို ၁၄၆.၁၆ သာဖြစ်သည်
ယခုသီတင်းပတ်တစ်လျှောက်လုံး Banggood ၏ကမ်းလှမ်းချက်များအရကျွန်ုပ်တို့သည် UMIDIGI One၊ ၅.၉၉ လက်မမျက်နှာပြင်နှင့် HD + resolution နှင့်ရှုထောင့်အချိုး ၁၉: ၉ တို့ကိုမီးမောင်းထိုးပြရန်လိုသည်။ အတွင်းပိုင်းကျနော်တို့ရှာပါ MediaTek မှ Helio P23 ပရိုဆက်ဆာသည် RAM4GB နှင့်သိုလှောင်မှု 32 GB ပါရှိသည်။
အခြားအာရှဆိပ်ကမ်းများနှင့်မတူဘဲ၊ Android 8.1 ဖြင့်ရနိုင်သည်ထုတ်လုပ်သူများအကြားတွင်တစ်ခါတစ်ရံရှာရန်ခက်ခဲသောအရာ။ ရှေ့ကင်မရာသည် 16 mpx သို့ရောက်ရှိပြီးနောက်ကင်မရာစနစ်တွင် 12 mpx မှန်ဘီလူးနှင့်5mpx မှန်ဘီလူးများပါဝင်ပြီးအကောင်းဆုံးပုံများရိုက်ကူးနိုင်သည်။
UMIDIGI One Pro ကို ၁၇၁.၉၅ ယူရိုသာရှိသည်
UMIDIGI One Pro သည်အချိန်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာရောင်းချနိုင်သောမော်ဒယ်ဖြစ်ပြီး ၅.၉၉ လက်မ HD + resolution ဖန်သားပြင်၊ Android 5,99၊ MediaTek Helio P8.1 ပရိုဆက်ဆာနှင့်အတူ One မော်ဒယ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရသောတူညီသောအင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူတူပင်။ RAM ၏ 23 GB ။ အဓိကကွာခြားချက်ကတော့အဲဒါကိုသိုလှောင်ရာနေရာမှာတွေ့နိုင်တယ် 64 GB အထိတိုးမြှင့်သောအာကာသOne မော်ဒယ်လ်မှကမ်းလှမ်းသော 32 GB အစားအစားထိုး microSD ကဒ်များကို အသုံးပြု၍ 256 GB အထိသိုလှောင်နိုင်သည့်နေရာကိုချဲ့ထွင်နိုင်သည်။
ယူရို ၉၄.၅၇ ဖြင့် ၂၅% လျှော့စျေးရှိသည့် Elephone S7
ဤကမ်းလှမ်းချက်များကိုတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏အရေးအကြီးဆုံးမော်ဒယ်လ်များထဲမှစတင်သည်။ တစ်ခုရှိ ၅.၅ လက်မမျက်နှာပြင်နှင့် Helio X5,5 ကိုအသုံးပြုသည် ပရိုဆက်ဆာအဖြစ်။ RAM အတွက် ၄ GB GB ရှိပြီး4GB Internal Storage ပါရှိပါတယ်။ အနောက်ဘက်ကင်မရာ ၁၃ MP ပါရှိပါတယ်။ ဒီပုံစံကရှေ့ဘက်မှာလက်ဗွေရာအာရုံခံကိရိယာတပ်ဆင်ထားတာကိုဆိုလိုတာပါ။
Banggood ကဒီပုံစံကိုယူဆောင်လာသည် ၉.၉၉ ယူရိုစျေးနှုန်း ဒီမြှင့်တင်ရေးအတွက်။ ဒါဟာယူဆတယ် ၅၇% လျှော့စျေး ထွက်မသွားပါစေနဲ့!
LEAGOO S9 မှာယူရို ၁၂၀.၃၆ ဈေးနှုန်းဖြင့် ၁၈% လျှော့စျေးဖြင့်ရနိုင်သည်
LEAGOO သည်ဤကဲ့သို့သောမော်ဒယ်များကို ကျေးဇူးတင်၍ ဥရောပစျေးကွက်တွင်နယ်ပယ်တစ်ခုဖန်တီးပေးသောတံဆိပ်ဖြစ်သည်။ ပိုင်ဆိုင်သည် Full HD + resolution ဖြင့် ၅.၈၅ လက်မမျက်နှာပြင်၎င်းတွင်ပါရှိသည့်အကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးကိုမြင်နိုင်ရန်မလွယ်ကူပါ။ ပရိုဆက်ဆာတစ်ခုအနေနှင့် MTK6750 ကို ၄ GB GB RAM နှင့်4GB Internal Storage ဖြင့်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ဖုန်းကသူ့ရဲ့ဒီဇိုင်းကိုထင်ပေါ်ကျော်ကြားပြီးမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိအထစ်နှင့်အတူ။ ပုံစံကောင်းတစ်ခုရှိပြီးပုံစံကောင်းတစ်ခု။
Banggood ကဒီ model ကိုစျေးနှုန်းနဲ့ယူဆောင်လာသည် 120,36 ယူရို ဒီမြှင့်တင်ရေးအတွက်။ အထူးလျှော့စျေး ၁၈% မူရင်းစျေးနှုန်းကျော်။
2 ယူရိုစျေးနှုန်းမှာ 33% လျှော့စျေးနှင့်အတူ DOOGEE MIX 171,95
စျေးကွက်တွင်တိုးတက်နေသည့်နောက်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုမှာ DOOGEE ဖြစ်သည်။ ဒီဖုန်းမှာမျက်နှာပြင်အရွယ်အစား ၅.၉၉ လက်မရှိပါတယ်။ ၎င်းတွင် Helio P5,99 ပရိုဆက်ဆာအဖြစ် ၆ GB RAM နှင့်သိုလှောင်မှုပမာဏ ၆၄ GB ပါရှိသည်။ ဒီ model ကြီးသည် 4.060 mAh ဘက်ထရီကြီးမားသည်အသုံးပြုသူများအားကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်များစွာပေးသည်။ အချို့သောထူးခြားသောလုပ်ဆောင်ချက်များအနက်မျက်နှာဖုံးအသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်နောက်ကင်မရာနှစ်ခြင်းဖြင့်သော့ဖွင့်ခြင်းကိုတွေ့ရသည်။
Banggood မှာဖုန်းတစ်လုံးကိုတွေ့ခဲ့တယ် ၉.၉၉ ယူရိုစျေးနှုန်း ဒီမြှင့်တင်ရေးအတွက်။ အလွန်ကြီးစွာသော ၃၃% လျှော့စျေးမူရင်းစျေးနှုန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက
ဈေးနှုန်း ၉၁.၁၃ ဒေါ်လာဖြင့် ၃၁% လျှော့စျေး Nubia M2 Lite
Nubia M2 Lite သည်အတူတူပင်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းတွင် Nubia M2 ၏နှစ်ဆကင်မရာကိုရှာမတွေ့ပါ။
Nubia သည်များစွာသောလူသိများပြီးစျေးကွက်ထဲမှအချို့သောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုအကွာအဝေးအမျိုးမျိုး၏မော်ဒယ်များကြီးမားသောရွေးချယ်ရေးနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုထားခဲ့ပါ။ ၎င်း၏မော်ဒယ်များတစ်ခုမှာဒီ M2 Lite ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းတွင် ၅.၅ လက်မမျက်နှာပြင်ရှိသည်။ Processor တစ်ခုအနေနှင့် MTK6750 ကိုအသုံးပြုထားပြီး3GB RAM နှင့် 64 GB Internal Storage ပါရှိပါသည်။ အနောက်ကင်မရာက 16 MP၊ ရှေ့ကင်မရာက 13 MP ဖြစ်ပြီးကြီးမားတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုရိုက်ကူးနိုင်ပါတယ်။
Banggood ကဒီပုံစံကိုယူဆောင်လာသည် ၉.၉၉ ယူရိုစျေးနှုန်း ဒီမြှင့်တင်ရေးအတွက်။ မူရင်းစျေးနှုန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ၃၁% လျှော့စျေး။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » ထိပ်တန်း Banggood ကမ်းလှမ်းချက်များ - စက်တင်ဘာ ၂၄ ရက်မှ ၃၀ ရက်အထိ၊
ဤအရာအားလုံးကို Banggood အရောင်းစာမျက်နှာတွင်ဖော်ပြထားသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်စပိန်သို့တင်ပို့ခြင်းနှင့်သာမာန်သင်္ဘောတင်ခြင်းတို့တောင်းခံလျှင်၎င်းသည်သင်၏အမှာစာအတွက်တစ်လခန့်ကြာမြင့်မည်ဆိုပါကသင့်အတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုန်ကျစရိတ်သို့မဟုတ်အများစုအတွက်အကောက်ခွန်ကုန်ကျစရိတ်များကိုမတောင်းပါ။ အမှုပေါင်း။
Express ၀ န်ဆောင်မှုအားဖြင့်သင်တောင်းခံပါက DHL မှပေးဆောင်ပြီးအကောက်ခွန်ကုန်ကျစရိတ်များကိုမဖယ်ရှားပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ Mi A1 ကိုဗီဒီယိုပြန်လည်ကြည့်ရှုရန်အမြန်ဆုံးအမိန့်ပေးခဲ့သည်။ သူတို့ကအကောက်ခွန်ကုန်ကျစရိတ်အတွက် ၃၅ ယူရိုကိုကျွန်ုပ်အားပေးခဲ့သည်။
90 $ ကျွန်ုပ်အလွန်အကျွံရှာသည်ကိုသင်တွေ့ရပြီးသင်၏တိုင်းပြည်ကောက်ခံသည့်အကောက်ခွန်မဟုတ်ပါက၎င်းသည် Banggood အရာမဟုတ်ပါ။